Pandemic နှင့် Beyond မှတဆင့်ခိုင်ခံ့သော Dutchtown
အပေါ် Posted ဧပြီလ 24th, 2021
ရန်အလှူရှင်ဖြစ်လာ DT2! ဒေါ်လာစျေးတိုင်းသည် DT2 ကိုကူညီသည်။ • Downtown Dutchtown သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်သူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်အခြားသက်ဆိုင်သူများအားလုံးအတွက်တိုးတက်သော Dutchtown တည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သည်။
ယခုအခါ DT2 သည်လုပ်ခွင့်ပေးနေသည် လစဉ်အလှူငွေများထပ်တလဲလဲ! “ ရေရှည်တည်တံ့သောလှူဒါန်းမှု” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောငွေပမာဏကိုလစဉ်ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
သင့်ကိုလှူဒါန်းရန်ခရက်ဒစ်ကဒ်၊ ဘဏ်ငွေလွှဲ (ACH) သို့မဟုတ် PayPal မှတဆင့် DonorBox ဝဘ်ဆိုက်သို့သီးခြား tab သို့မဟုတ်ပြတင်းပေါက်ဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
အခုလှူဒါန်းလို့မရဘူးလား။ ပြန်လာပါ dutchtownstl.org/donate သင်၏စဉ်ဆက်မပြတ်လှူဒါန်းမှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၂၀၂၀ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ၂၀၂၁ အတွက်အစီအစဉ်များကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘရိုရှာကို PDF format ဖြင့်ကူးယူပါ.
၂၀၂၀ သည်ခက်ခဲသောနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ကြောင်းငြင်းဆန်စရာမရှိပါ။ မကြုံစဖူးကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းနှင့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြောင့်လူနှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့သည်။
COVID-19 ကူးစက်ရောဂါသည်လူတိုင်း၏ဘဝကိုပျက်ပြားစေသည်။ ဒါတောင်မှ Dutchtown မြို့လယ် တစ် ဦး ပိုမိုအားကောင်းတဲ့ Dutchtown ရပ်ကွက်အတွင်းတည်ဆောက်ဆက်လက်။ DT2 နှင့်အိမ်နီးချင်းနှစ် ဦး စလုံးသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များအတွင်း Dutchtown တွင်မတွေ့ရသေးသောရှေ့ဆက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နေပြီးအရှိန်အဟုန်ကိုတည်ဆောက်နေကြသည်။
2021 တောက်ပလှပါတယ် DT2 သည်စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကိုကိုင်တွယ်ရန်၊ ဖြေရှင်းနည်းများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အသစ်သောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အတူယခင်ကထက်ပိုမိုပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည် UrbanMain ပဏာမခြေလှမ်းသက်တမ်းတိုး အိမ်နီးချင်းများအကျိုးစီးပွားနှင့်အသစ် ဆက်ကပ်အပ်နှံန်ထမ်း.
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ DT2 ၏တာဝန်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရန်သင်၏အကူအညီကိုတောင်းခံနေပါသည် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းနှင့် Dutchtown ရပ်ကွက်အတွင်းအခွင့်အလမ်းများမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်အောင်မြင်သောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သာယာဝပြောမှုမျှဝေခြင်းတို့အတွက်ဖြစ်သည်။ ဤမစ်ရှင်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မတူကွဲပြားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဆွဲဆောင်ရန်၊ နေရာများ၊ နေရာများနှင့်မျက်နှာများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်နေရာထိုင်ခင်းကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်နှင့်လူတိုင်းအတွက်ပိုမိုအားကောင်းသည့် Dutchtown တည်ဆောက်ရန်အတွက်အလှူရှင်များအားထောက်ပံ့ရန်ခိုင်မာသောအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာယခုနှစ်တွင်နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ငွေအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀,၀၀၀ ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့လစဉ်အလှူငွေ ၁၀ ဒေါ်လာ၊ ၂၅ ဒေါ်လာ၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀ တို့ဟာငါတို့ကိစ္စအတွက်အများကြီးလမ်းခင်းပေးတယ်။
သင်၏ပါဝင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများအပါအဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြံ့ခိုင်သောပရိုဂရမ်းမင်းကို ဆက်လက်၍ ချဲ့ထွင်ရန်ခွင့်ပြုသည် မစ်ဆူရီပင်မလမ်းဆက်သွယ်မှု နှင့် UrbanMain ပဏာမခြေလှမ်း၏ပြန်လည်အသက်သွင်း Marquette ပန်းခြံကျွန်ုပ်တို့၏အနီးအနားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်နောက်ထပ်အထောက်အပံ့များပေးရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုမိုသောအရာများ။
DT2 သည်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများအားလုံးလုံးလျားလျားမောင်းနှင်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၂၀ တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အားထုတ်မှုများကိုတိုးချဲ့ရန်အချိန်ပိုင်း ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကိုငှားရမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ ငါတို့ Dutchtown ကြီးထွားမှုမန်နေဂျာ ကျွန်ုပ်တို့အားထောက်ပံ့ငွေလျှောက်ထားရန်၊ စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ရပ်ကွက်အတွင်းမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်ဒတ်ခ်ျတောင်းအသိုင်းအဝိုင်းအားတစ်ခါမျှမတူအောင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးမည့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုရရှိစေသည်။ သင်၏တည်မြဲသောလှူဒါန်းမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးတိုးတက်သော Dutchtown ကိုတည်ဆောက်သည့်အခြေခံကိုထပ်မံဖြည့်ဆည်းရန်ကူညီပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဒီနေ့ရေရှည်တည်တံ့တဲ့အလှူရှင်ပါ.
Dutchtown အတွက် UrbanMain Initiative
UrbanMain ၏အချက်လေးချက် (ပေါင်းတစ်ခု)
သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော & အစိမ်းရောင်
DT2 သည် Missouri Main Street နှင့် Dutchtown CID တို့နှင့်ပူးပေါင်းပြီး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံအသစ် ငါးမှတ်တစ်ခုချင်းစီမှသက်ဆိုင်ရာ။ ကော်မတီများအားလုံးပွင့်လင်းသည်။ သင်ပိုမိုရှာဖွေပြီးလုပ်အားပေးနိုင်သည် Dutchtownstl.org/committees.
DT2 နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည် မစ်ဆူရီပင်မလမ်းဆက်သွယ်မှု ပြည်နယ်အတွက်ပထမ ဦး ဆုံး -of-it- ကြင်နာအစီအစဉ်ကိုအပေါ်။ ဤအစီအစဉ်သည်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိမြို့ကြီးများရှိသမိုင်းဝင်မြို့ကြီးများကိုပြန်လည်ရှင်သန်အောင်မြင်စေသည့်အချက်လေးချက်ပါသောချဉ်းကပ်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ ငါတို့ကဲ့သို့မြို့ပြရပ်ကွက်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြေရှင်းရန်ပဉ္စမအချက်ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ အချက် (၅) ချက်မှာအဖွဲ့အစည်း၊ စီးပွားရေးတက်ကြွမှု၊ မြှင့်တင်ရေး၊ ဒီဇိုင်းနှင့်လုံခြုံသောသန့်ရှင်းရေးနှင့်အစိမ်းရောင်တို့ဖြစ်သည်။
Missouri Main Street နှင့်ပူးပေါင်းခြင်းသည် Downtown Dutchtown ကိုအဓိကအာရုံစိုက်ပြီးသုံးနှစ်တာစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ၄ င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အတွင်းရှိအရှိန်အဟုန်ကိုပြန်လည်အားဖြည့်ပေးပြီး DT2 သည် Dutchtown ရပ်ကွက်အတွင်းတွင်အကောင်အထည်ဖော်ရန်မဟာဗျူဟာများဖော်ထုတ်ရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
COVID-19 ကအိမ်နီးချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသော်လည်း DT2 သည်အခြား Dutchtown အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ လူများကိုအတူတကွစုရုံးစေခဲ့သည်။ Marquette ပန်းခြံ ကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုများသည် ရုပ်ရှင်ည.
ထို့အပြင်တစ် ဦး မိတ်ဖက်နှင့်အတူတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် St. Louis ၏အဓိကလိဂ်ဘောလုံးအသင်းအသစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဘောလုံးကွင်းကိုတိုးတက်အောင်ပံ့ပိုးရန်နှင့်ဘောလုံးကွင်းကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဖူဆယ် ဘောလုံးနှင့်ဆက်စပ်သော်လည်းသေးငယ်တဲ့အစေးပေါ်ကစားခဲ့သည်။
Dutchtown သည်အသစ်သောအသစ်များနှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းကိုကြိုဆိုသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းနှင့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုများရှိသော်လည်းလုပ်ငန်းရှင်များသည် Dutchtown တွင်သူတို့၏အိပ်မက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်သူတို့၏ပိုက်ဆံနှင့်အချိန်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြသည်။
မြို့ပြစား သူတို့ရဲ့ပြန်လည်စိတ်ကူးထားတဲ့ Shared Kitchen and Neighborhood FoodHall သဘောတရားများကိုစတင်ခဲ့သည်။ ညစာစားသူများသည် Urban Eats ရှိစားသောက်ဆိုင်အသစ်များသို့စုရုံးရောက်ရှိလာကြသည်။ Juanita's Creole Soul လှည့်ကွက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအစားအစာများအတွက်အရေးပါကောင်းချီးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Tacos, La Jefa သူတို့၏အိမ်နောက်ဖေးမှ birria tacos များကိုအစေခံခြင်းမှအုတ်နှင့်မော်တာနေရာများရှိဖောက်သည်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုသို့သွားခဲ့သည်။ ပြီးတော့ Pasုံ pastry နံနက်ခင်းကော်ဖီ၊ မုန့်ပြားနှင့်အချိုပွဲများကို Dutchtown တွင်ရှည်လျားစွာမထားရှိသောနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗာဂျီးနီးယားရိပ်သာလမ်းရှိ Shay's Donuts သည်နံနက်စာစားစရာများကိုအိမ်နီးချင်းများအားယူဆောင်လာပြီးယခင်စားသောက်ဆိုင်အသစ်တစ်ခုသို့နေရာအသစ်ကိုတီထွင်ရန်ယခင် Iron Barley တွင်အလုပ်လုပ်နေသည်။
သင်၏ DT2 သို့သင်လှူဒါန်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အနီးအနားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆွဲဆောင်ရန်၊ ကြီးထွားရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်ကူညီသည်။ ယနေ့သင်၏တည်မြဲသောလှူဒါန်းမှုကိုပြုလုပ်ပါ.
ဆိုင်အသစ်များလည်း Downtown Dutchtown သို့လည်းရောက်လာသည်။ အသစ်ရောက်ရှိလာသောပါဝင်သည် ကမ်ဘိုကာအဝတ်အစားများ၊ လက်ဆောင်များနှင့်အခြားကုန်ပစ္စည်းများရောင်းသည့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်; Boutique ကိုမမေ့ပါနှင့်အမျိုးသမီးအဝတ်အထည်များ၊ အပိုပစ္စည်းများနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာစောင့်ရှောက်မှုအထူးပြုခြင်း၊ နှင့် Melanin Made Beauty သည်ဆံပင်နှင့်အလှအပပစ္စည်းများအပြင်ပြန်လည်ရောင်းချသည့်အဝတ်အစားများကိုလည်းရောင်းချခဲ့သည်။ ဆံသဆိုင်အသစ်များနှင့်အလှပြင်ဆိုင်များသည်လည်း Meramec တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ Grand Cross သူတို့ရဲ့တည်ထောင်ခဲ့သည် အသစ်အုတ်နှင့်မော်တာတည်နေရာ။ Dutchtown တွင်နေထိုင်သူများကလုပ်ကိုင်သောစီးပွားရေးသည်ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ ပွဲစီစဉ်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ထူထောင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ကူးစက်ရောဂါမှတဆင့်ရှေ့သို့တွန်းပို့ခဲ့သည်။ Downtown Dutchtown မြင်သည် ဒိုင်ယာနာရဲ့ဖက်ရှင်ဆိုင် Meramec တွင်ပိုမိုကြီးမားသောနေရာတစ်ခုသို့ချဲ့ထွင်ပြီးအတူတကွပူးပေါင်းပါ ငွေကုန်ပွီ $ #! & upstart စီးပွားရေးအတွက်အခွင့်အလမ်းပေးဖို့။ The မူရင်းခရူးဆူးစားသောက်ဆိုင် သူတို့ရဲ့အနှစ် ၄၀ မှာစစ်သားတွေဟာသူတို့ရဲ့ဂန္ထဝင်စာအုပ်တွေကိုသယ်ဆောင်ထွက်ခွာသွားဖို့၊ Logan ၏ကလေးများပြန်လည်ရောင်းချခြင်း ထောက်ပံ့ ကို virtual စျေးဝယ်အခွင့်အလမ်းများ သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနီးအနားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသောအခြေအနေနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေစွာနေထိုင်ပြီး၊ သူတို့၏အိမ်နီးချင်းများလိုအပ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသူတို့၏လုံခြုံမှုကိုလည်းကာကွယ်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် (တစ်နိုင်ငံလုံးရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကဲ့သို့) ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းရုန်းကန်ခဲ့ရသော်လည်းဤနေရာများအမြန်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ လုပ်ငန်းရှင်များသည် Dutchtown တွင်အခွင့်အလမ်းများတွေ့မြင်ရပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အတွင်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်များအတွက်အသစ်နှင့်အသစ်နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်အနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်နေကြသည်။
ငါတို့မြို့၏အတိတ်နှင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားတွင်ထင်ရှားနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စိန့်လူးဝစ္စ၏လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးသောရပ်ကွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးထွားမှု၊ ကျုံ့မှုနှင့်ကြီးထွားမှုတို့ကိုထပ်မံခံစားခဲ့ရသည့်ရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ Dutchtown ဂုဏ်ယူကြသည်.
စိန့်လူးဝစ္စတွင်ကွဲပြားခြားနားသော၊ ရွှံ့နွံများနှင့်ရှေ့ဆက်စဉ်းစားတွေးခေါ်သည့်ရပ်ကွက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။ ဤနေရာတွင်သာယာဝပြောမှုအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ Dutchtown အိမ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရတာလဲဆိုတာကိုသံသယဝင်သူတွေကိုပြောပြရတာဂုဏ်ယူပါတယ်
သင်၏ Dutchtown မာနကိုပြပါ ထပ်တလဲလဲလစဉ်အလှူငွေ DT2 ရန်။ ရေရှည်တည်တံ့သောအလှူရှင်များသည် Dutchtown Proud ခြံဝင်းအမှတ်အသားကိုအခမဲ့ရရှိကြသည်။
Dutchtown အိမ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ခေါ်ပါတယ်။ ငါတို့အတူတူလာပြီးသူတို့ဘဝကိုအတိအကျမတူ၊ မနေထိုင်နိုင်သည့်အိမ်နီးချင်းများနှင့်အသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုတည်ဆောက်ရန်ရွေးချယ်သည်။ အိမ်နီးချင်းများ၏ Dutchtown ကိုမည်သူမည်ဝါ၊ မည်သူတို့ချစ်ကြသည်၊ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း၊ လူနေမှုဘ ၀ အတွက်ဘာလုပ်သည်၊ မည်သည့်အခြေအနေများသို့ရောက်ရှိစေကာမူမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊
2020 ၏များ၏ kickoff မှတ်သား Dutchtown ဂုဏ်ယူပါတယ် အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းကိုဖြတ်ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး။ ကနေထောက်ပံ့ငွေနှင့်အတူ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများ၏စိန့်လူးဝစ်အသင်း (SLACO) သည်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိမာနနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသရန်ရာနှင့်ချီသောခြံဝင်းအမှတ်အသားများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Dutchtown တွင်နေထိုင်သူများနှင့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များဖြစ်ခြင်းကိုဂုဏ်ယူစေသည့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုလည်းထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဗွီဒီယိုကိုသင်ရှာနိုင်သည် Dutchtownstl.org/proud.
2021 နှင့် Beyond များအတွက်ကြီးမားသောအစီအစဉ်များ
DT2 နှင့် Dutchtown ရပ်ကွက်သည်မကြုံစဖူးစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း ၂၀၂၀ တွင်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများတိုးပွားလာသည်။ ရပ်ကွက်အတွင်းစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်မားသည်။ နောင်လာမည့်နှစ်များတွင် Dutchtown တွင်တက်ကြွ။ သာတူညီမျှသောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စိတ်ကူးကောင်းကောင်းသောအုတ်မြစ်နှင့်မိတ်ဖက်များရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကအခုမှစတာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှင့်နောက်ပိုင်းကာလများ၌ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ကူညီရန်သင့်အကူအညီကိုတောင်းခံပါသည်။ လစဉ်ဒေါ်လာ ၁၀၊ ၂၅ သို့မဟုတ်ဒေါ်လာ ၅၀ ဖြင့်ထည့်ဝင်သောအလှူငွေကကျွန်ုပ်တို့အား Dutchtown သို့အရင်းအမြစ်များပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းများပြုလုပ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်သူများနှင့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များအားလုံးအတွက်ပိုမိုတောက်ပသောအနာဂတ်ကိုစီစဉ်ရန်ကူညီသည်။ ယနေ့ရေရှည်တည်တံ့သောအလှူရှင်ဖြစ်လာသည်.
2 များအတွက် DT2021 အစီအစဉ်
အဆိုပါ UrbanMain Initiative
အဆိုပါ UrbanMain ပဏာမခြေလှမ်း ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်4+ 1 Point Approach ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် Missouri Main Street Connection ရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ထမ်းများနှင့်နီးကပ်စွာလက်တွဲလုပ်ဆောင်ပါမည်။ ပိုမိုလေ့လာပါ dutchtownstl.org/urbanmain.
၂၀၂၀ နှောင်းပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုးပမ်းမှုအသစ်များကိုစတင်ခဲ့သည် အသစ်ရှိပြီးတည်ဆဲ Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်သွယ်ပါ အရောင်းမောင်းနှင်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ပေးရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ DT2 မတိုင်မီနာရီများဖြစ်ရပ်များ - ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များအားအရင်းအမြစ်များကိုတွေ့ဆုံရန်၊ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့်ခွဲဝေရန်အခွင့်အရေးပေးသည့်ကော်ဖီနာရီများ - ကိုလည်းစတင်ခဲ့သည်။ သင်ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ် dutchtownstl.org/ စီးပွားရေး.
DT2 နာရီပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏လစဉ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောရပ်ကွက်အတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်နွေ ဦး ရာသီ၌ပြန်လည်စတင်မည်။ ဘေးကင်းမှုသည်အဓိကစိုးရိမ်စရာဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ရွာလူထုကိုအတူတကွစုစည်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်အဆန်းများကိုအာရုံစိုက်ရန်အရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ထူထောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိကိုစောင့်ရှောက်ပါ Dutchtown ပြက္ခဒိန် နာရီပြီးနောက်နှင့်အခြားဖြစ်ရပ်များပြီးနောက်ပိုမိုသည်။
ငါတို့ရဲ့နွေရာသီတတိယနှစ်အတွက်လည်းစီစဉ်ထားတယ် Marquette ပန်းခြံရှိရုပ်ရှင်ည။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Movie Nights သည်ရာပေါင်းများစွာသောအိမ်နီးချင်းများကိုမိသားစုနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောဖျော်ဖြေမှုများ၊ အစားအစာထရပ်ကားများ၊ မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ဇယားကိုကြည့်ပါ dutchtownstl.org/movienight.
DT2 သည်၎င်းနှင့်နီးကပ်စွာဆက်လက်အလုပ်လုပ်သည် Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင် ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အလယ်ပိုင်းမှ ဖြတ်၍ စီးဆင်းနေသောအရေးပါသောစင်္ကြံလမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်။ ဖွဲ့စည်းရန်ကူညီပြီးနောက် CID ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်အခြေခံအဆောက်အအုံများတိုးတက်ခြင်းနှင့်လုံခြုံမှု၊ လှပခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက်မဟာဗျူဟာအသစ်များတိုးတက်လာခြင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုမြင်တွေ့ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။
အဆိုပါ အိမ်နီးချင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုစင်တာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောမိတ်ဖက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြင်ပပွဲများအတွက်လုံခြုံစွာစုရုံးရန်နေရာ၊ ဝေးလံခေါင်ဖျားသောအစည်းအဝေးများကျင်းပရန်နည်းပညာနှင့်သူတို့၏ရှည်လျားသောအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များကိုဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သောကြောင့် Dutchtown ၏အသိုင်းအဝိုင်းစင်တာဖြစ်လာသည်။ The NIC Dutchtown ရှိလူထုအဆောက်အအုံ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုခိုင်ခံ့စေဖို့ရည်ရွယ်ပါလိမ့်မယ် Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်း ဒေသခံများအားစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ တတ်နိုင်သောအိမ်ရာများဆောက်လုပ်ပေးခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းစသည်တို့ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင်သူတို့သည်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုကြုံတွေ့ရသည် Gravois ဂျက်ဖာဆန်သမိုင်း ၀ င်အိမ်နီးချင်းအစီအစဉ်.
အဖွဲ့အစည်းများကဲ့သို့သော သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာ, အလုပ်အကိုင်ချိတ်ဆက်မှု, နှင့် Cure Violence အစီအစဉ်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်ရှိကျောင်းများ၊ အသင်းတော်များနှင့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသောတာဝန်ရှိသူများအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုအတွင်းမှအမျိုးမျိုးသောအသံများဖြင့်လမ်းညွှန်မှုကိုဆက်လက်ရရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်သူများနှင့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များဘေးတွင်စားပွဲတစ်လုံး၌ထိုင်ခုံရှိလိမ့်မည်။ Dutchtown အသိုင်းအဝိုင်း။
DT2 ကိုယနေ့ Support!
DT2 သည်ရှည်လျားသောဘတ်ဂျက်နှင့်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများဖြင့်သာတာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဒီနှစ်မှာငါတို့အလုပ်ကိုနောက်အဆင့်အထိရောက်ဖို့မျှော်လင့်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown Growth Manager အသစ်နှင့် Missouri Main Street Connection ကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများသည်ယခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်မရရှိနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုပေါ်ပေါက်လာစေသည်။
သို့သော်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုအသိုင်းအ ၀ န်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် Dutchtown ရပ်ကွက်အတွင်းရှိစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြားအဝေးရောက်ခြင်းများမှတဆင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသောရန်ပုံငွေများကိုလိုအပ်သည်။
DT2 ၏ ၂၀၂၁ ရန်ပုံငွေရည်မှန်းချက် - ရေရှည်တည်တံ့သောအလှူငွေများအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀
DT2 · Downtown Dutchtown ကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့လွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ရိုးရှင်းစွာသွားပါ dutchtownstl.org/donate ဘယ်မှာလုပ်မလဲ ထပ်တလဲလဲ သို့မဟုတ်တစ်ကြိမ်လှူဒါန်းခြင်း။ ထပ်ခါတလဲလဲလှူဒါန်းမှုများသည်သင်၏အကောင့်မှလစဉ်အလိုအလျောက်ငွေသွင်းလိမ့်မည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ နီးပါးခန့်အပ်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်လူ ၂၅ ယောက်သည်တစ်လလျှင် ၂၅ ဒေါ်လာလှူသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် မည်သည့်ပမာဏအတွက်ပံ့ပိုးမှုများကိုအလွန်တန်ဖိုးထားကြသည် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့် Dutchtown ရပ်ကွက်ရှိအခွင့်အလမ်းများကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့်အောင်မြင်သောလူမှုအသိုင်းအ ၀ န်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သာယာဝပြောခြင်းတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးကြီးသောမစ်ရှင်ကို DT2 အားဆက်လက်ကူညီရန်များစွာကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လှူဒါန်းမှုများကိုလည်းချက်လက်မှတ်ဖြင့်လက်ခံသည်။ ငွေကုန်ကြေးကျခံ။ DT2, 3207 Meramec Street, St. Louis, MO 63118 သို့ပေးပို့နိုင်သည်။
အောက်မှာ Filed DT2. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. Covid-19, DT2, ဒိန်းမတ်, Dutchtown စီးပွားရေး Showcase, ရန်ပုံငွေရှာ, Marquette ပန်းခြံနှင့် UrbanMain. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဇန်နဝါရီလ 15th, 2022 .
ဒိန်းမတ် DT2 Pandemic နှင့် Beyond မှတဆင့်ခိုင်ခံ့သော Dutchtown